Symbl.ai: Ngwaọrụ Mmepụta maka ọgụgụ isi mkparịta ụka | Martech Zone
Symbl.ai: Nzube Onye Mmepụta maka ọgụgụ isi mkparịta ụka
Akụ azụmaahịa kachasị baa uru bụ mkparịta ụka ya - ma mkparịta ụka nke ime n'etiti ndị ọrụ na ego mpụga na-eweta mkparịta ụka na ndị ahịa. Ihe ngosi bu ngwungwu niile nke API nke na-enyocha mkparita uka mmadu. Ọ na - enye ndị mmepe ikike ịkọwasị mmekọrịta ndị a ma wuo ahụmịhe ndị ahịa pụrụ iche na ọwa ọ bụla - ọ bụrụ olu, vidiyo ma ọ bụ ederede.
Ihe ngosi A na-ewu ya na teknụzụ Contextual Conversation Intelligence (C2I), na-enyere ndị mmepe aka itinye ngwa ngwa na ọgụgụ isi na-agabigaghị nhazi asụsụ nkịtị (NLP) na mkparịta ụka ederede. Na Symbl, ndị mmepe nwere ike iji aka ha rụọ ọrụ gbasara mkparịta ụka gbasara mkparịta ụka na-enweghị ọzụzụ / edemede ma nwee ike ịnye ezigbo isiokwu nchịkọta, ihe omume, ntinye, echiche, na ajụjụ.
Symbl's API na-enye anyị ọrụ dị iche iche dị iche iche iji wulite ahụmịhe nzuko dị ịtụnanya maka ndị ahịa anyị. Obi dị anyị ụtọ inye ndị ọrụ anyị nghọta na nzukọ akpaghị aka na ngwaahịa anyị nke Intermedia AnyMeeting® ma na-atụ anya ahụmịhe mkparịta ụka dị iche iche anyị ga-enye ike n'ọdịnihu.
Costin Tuculescu, VP nke Mmekọrịta na Okwu, onye ndu nkwukọrịta na igwe ojii na-eweta ngwa ahịa
Ikpo okwu si na igbe ahaziri UI wijetị, SDK mkpanaka, njikọta Twilio, na ihu API dị iche iche maka ngwa ekwentị na ngwa weebụ.
Site na ọgba aghara ugbu a, ngwaọrụ ọgụgụ isi mkparịta ụka dị ka Symbl nwere ike inye aka dị ukwuu, na-ekwu okwu banyere nsogbu nrụpụta nke ọrụ dịpụrụ adịpụ na akụ na ụba ụwa na-arịwanye elu. Site na mmụba nke ndị ọrụ dịpụrụ adịpụ, usoro ikpo okwu nke nwere ike inyere ndị mmepe aka ịgbakwunye na itinye nyocha mkparịta ụka abụghị naanị mkpa, ọ dị mkpa.
Ihe omuma ihe gunyere:
Ntụle Okwu - Achọpụta okwu akpaghị aka, nkewa okwu ọtụtụ, nchọpụta oke ahịrịokwu, akara edemede, mmetụta uche.
Nkọwa ederede ederede - Nghọta dị ka ihe Action, ntinye, echiche, ajụjụ, mkpebi yana achịkọta mkparịta ụka nke mkparịta ụka.
Customizable UI Wijetị - Ihe izizi izizi mkparịta ụka ọgụgụ isi zuru oke na wijetị UI iji mepụta ahụmịhe agbakwunyere na ngwa.
Real-Oge Dashboards - Nlele ọkwa kachasị elu nke mkparịta ụka gafee ndị ọrụ na azụmaahịa site na iji mbido, ezigbo oge.
Ngwakọta Ngwakọta Ọrụ - Mmekọrịta zuru oke site na iji webhooks wee pụọ na njikọta igbe na kalenda, email na ndị ọzọ.
Mkparịta ụka niile bara ọgaranya, enweghị usoro, yana gburugburu. N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, ha dị mgbagwoju anya. Ruo ugbu a, ọ bụ naanị ndị na-emepe emepe na ụlọ ọrụ dị iche iche nwere ohere ịnweta nhọrọ, ntuziaka, na mgbe ụfọdụ njehie na-adịghị mma iji belata mkpọtụ a. Ugbu a, ihe niile ha chọrọ ịkwaga karịa njedebe ndị a dị.
Symbl Conversational Intelligence Ihe Nlereanya:
Nke a bụ ihe atụ nke mmepụta nke mkparịta ụka n'etiti ndị bịara abụọ ebe a na-enye isiokwu nchịkọta, ntụgharị, nghọta, na ịgbaso usoro na ụbọchị na oge.
Debanye Akaụntụ Mgbaàmà
Tags: c2iContextual Mkparịta ụka ọgụgụ isiezumike apisdknyocha okwuakaratelefonederede ederedeTwilioolu apiMkpọchi
Etu aga-esi amata ndị ahịa B2B gị na Igwe Igwe
Lexio: Gbanwee Data gaa Asụsụ Eke